Ra'iisul wasaare Khayre oo Dooxa kula kulmay mas'uul sarre oo Washington ka tirsan ayaa hordhigay ajendahaan.
DOOXA, Qadar - Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dooxa kula kulmay xoghayaha maaliyadda dowladda Mareykanka, Steven Mnuchin, oo kamid ah madaxda ka qayb geleysa madasha 19-aad ee Dooxa.
Kulanka dhex maray Ra'iisul Wasaaraha iyo Steven Mnuchin ayaa looga hadlay dardar gelinta barnaamijka deyn cafinta ee gebagebada maraya iyo dowrka dowladda Mareykanka ee ka mira dhalinta dadaallada socda.
Dowladda Mareykanka ayaa kamid ah dowladaha saaxiibka dhaw la ah Soomaaliya kana caawiya dib-u-dhiska hey'adaha dowladeed.
Kulanka ayaa qayb ka ah kulamada uu Ra'iisul wasaaruhu la yeelanayo qaar kamid ah madaxda ka qayb geleysa madasha Dooxa.
Soomaliya 27.01.2020. 14:53
Daah-furka ayaa ka qabsoontay magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Soomaaliya oo dalab u gudbisay dowladaha Yurub iyo Mareykanka
Soomaliya 17.04.2020. 08:45
Khayre oo Muqdisho kula kulmay diblumaasi sare oo Ameerikaan ah
Soomaliya 22.01.2020. 18:11
Xildhibaan Shabaab lagu eedeeyay oo Dacwad ka gudbiyay Goodax
Soomaliya 07.04.2019. 11:40